Nchịkọta Nlekọta nke WordPress: Nchịkọta Ultimate Atụmatụ, Ngwaọrụ, na Omume Kachasị Mma | Martech Zone
Naanị taa m na - ezute ndị ahịa anyị abụọ gbasara nrụnye WordPress ha. Abụ m ezigbo onye na-ere ahịa-agnostic gbasara sistemụ njikwa ọdịnaya. Nchịkọta zuru oke nke WordPress enyerela ya aka ebe ọ bụ na ọtụtụ ndị ọzọ ga-etinye ya na ya, yana gburugburu na gburugburu ebe obibi na mgbakwunye ihe ọma dị ka ị nwere ike inweta. Emeela m ole na ole WordPress plugins, onwe m, iji nyere ndị ahịa anyị aka ma kwado gburugburu ebe obibi.
Nke ahụ kwuru, ọ bụ ezie na ọ nweghị nsogbu ya. N'ihi na ọ bụ ihe a na-ewu ewu usoro njikwa ọdịnaya, WordPress bụ isi ihe mgbaru ọsọ nke ndị na-agba ọsọ na ndị spammers ebe niile. Na, n'ihi ịdị mfe nke iji ya, ọ dị mfe iji wụnye ngwa ngwa nke na-eme ka saịtị kwụsị. Site na arụmọrụ dị oke egwu n'oge a maka iji ya na njikarịcha ọchụchọ, nke a anaghị agba nke ọma maka ọtụtụ saịtị.
Nke ahụ kwuru, ọ dị mma na enwere ndị dịka BigrockCoupon ndị mepụtara nkọwa zuru ezu iji nyere ndị nchịkwa WordPress aka. Ihe omuma ha, Nchịkọta Nlekọta Nlekọta nke WordPress, nwere ihe karịrị 50 ndụmọdụ na omume dị mkpa maka ndị nwe ebe nrụọrụ weebụ ka ịtọọ oge ha na arụmọrụ ha iji gbochie nsogbu.
Nke a bụ My WordPress Mmezi Ndepụta
The infographic nwere nnọọ ole na ole ihe, ma ọ bụrụ na ị na-ekpuchi ndị a ị na-na ụzọ nke gị asọmpi! M na-enwe ndepụta nke kacha mma WordPress plugins na anyị nwalere ma mejuputa ya… ijide n’aka na ịdebanye aha ya!
Weghachite WordPress gị - Tupu ime ihe ọ bụla na WordPress, gbaa mbọ hụ na ị nwere nkwado ndabere dị ukwuu nke edobere. Nke a bụ ihe kpatara anyị ji eji WordPress Bochum na Flywheel. Ha akpaghị aka na ntuziaka backups na otu-pịa restores. Anyị enweghị ike ịhazi ma ọ bụ kwado ihe ọ bụla… ha nọ mgbe niile!
Nye WordPress nlele - Gbaa saịtị gị site na Nyocha WP ị ga-ahụ tọn nke ihe iji kpochapụ saịtị gị. Ọ bụghị okwu ọ bụla ga - emetụta gị - mana ntakịrị njikarịcha dị mkpa!
Nyochaa Speed ​​Speed ​​weebụsaịtị - Tinye n'ọrụ Nghọta Peeji nke Google iji nyochaa peeji maka nsogbu ngwa ngwa.
Lelee maka Broken Links - Ebe m jirila ọtụtụ ihe dị n'ịntanetị, ahụbeghị m ihe ka mma karịa Na-eti mkpu Frog SEO Ududo maka crawings saịtị maka gbajiri njikọ. Ihe ọmụma ahụ na-atụ aro ịgbakwunye ngwa mgbakwunye iji mee nke a, mana nke ahụ nwere ike iweda arụmọrụ gị ma mee ka gị na onye ọbịa gị nwee nsogbu.
301 Redirect maka Broken Links - N'èzí ndị ahịa anyị na-akwado WPEngine, nke nwere ochichi redirection ya, ndị ahịa anyị niile na-agba ọsọ ahụ Redirection ngwa mgbakwunye.
Nweta nkwalite WordPress, Gburugburu, na Plugins na Kacha ọhụrụ na Version - Nke a dị oke mkpa n'oge a maka nsogbu nchekwa. Ọ bụrụ n’ị bụ otu n’ime ndị ahụ na - echegbu onwe ha maka mmelite ngwa mgbakwunye nwere ike mebie saịtị gị, ị nwere ike chọọ ịchọ ngwa mgbakwunye ọhụụ. Ndị mmepe niile nwere ohere ịnwale isiokwu ha na plugins na mbipụta WordPress na-abịa.
Hichapụ Nkwupụta Spam - Aga m akwadoro inweta Jetpack na ịdenye aha na Akismet iji nyere aka na nke a.
Hichapụ ejibeghi Gburugburu, Ihe oyiyi, na-arụsi ọrụ ike, ejibeghi plugins - Ọrụ plugins tinyekwuo koodu gị na saịtị ahụ mgbe ekwusara. Nke ahụ n’elu nwere ike ibelata saịtị gị n’ezie ka ụzọ kacha mma ị ga - esi mee bụ ime.
Clear Versions na Mkpofu - Obere nchekwa data gị, ihe na-agba ọsọ ọsọ iji dọpụta ọdịnaya. Jide n'aka na ihicha peeji na biputere nsụgharị yana ihichapụ peeji na posts mgbe niile.
Nlekota oru nche websaịtị - Flywheel Anyị abụghị ezigbo ndị na - akwado plugins nchekwa, m ga - akwado iso ndị ọbịa buru ibu. Ndị otu ha nọgidere na nchekwa na enweghị arụmọrụ n'elu ngwa mgbakwunye.
Na-ebuli Tebụl data - Ọ bụrụ na ị wụnye ọtụtụ isiokwu na plugins, ọtụtụ n'ime ha na-ahapụ data na nchekwa data gị. Nke a nwere ike ịgbakwunye arụmọrụ arụmọrụ ma nwekwuo oge ọrụ ebe ọ bụ na enwere ike ịjụ ma data ejighi data ma jupụta ya ma ọ bụ na ọ bụghị. Ihe mgbakwunye ahụ edepụtara bụ agadi, aga m akwado Ọkacha elu nchekwa data.
Ihe ngosi onyonyo - Ihe oyiyi a na-ejikọtaghị ọnụ nwere ike imetụta arụmọrụ nke saịtị gị. Anyị hụrụ n'anya Kraken ya na WordPress ngwa mgbakwunye maka ịpịkọta ihe oyiyi anyị.
Lelee Nwepu Email na Fordị Kpọtụrụ Ọrụ - ndọda Forms Anyị nwetere mkpesa n'aka ndị ahịa na-aga n'ihu na saịtị ọhụrụ ha nwere ụdị ma ha anatabeghị ndu ọ bụla. Mgbe anyị nyochara saịtị ahụ, anyị chọpụtara na ụdị ndị ahụ bụ ụdị dị iche iche na onye ọ bụla nwere ike ịkpọtụrụ ụlọ ọrụ ahụ nyefere mana data ahụ anaghị aga ebe ọ bụla. Na-egbu mgbu! Anyị na-eji ya na ndị ahịa ọ bụla!
Nyochaa nchịkọta Google - Ọ na - eju ndị ahịa anyị anya ole na ole peeji ha ka edepụtara site na injin ọchụchọ ma ọ bụ ndị ọbịa gụrụ ya. Anyị nwere ekele karịsịa Ọrụ Flow, akụkọ ahụ na-egosi otú ndị mmadụ si agagharị na saịtị gị.
Lelee njikwa ọchụchọ Google - Nchịkọta na-egosi gị onye rutere saịtị gị n'ezie. Kedụ maka ndị lere saịtị gị na nsonaazụ njin ọchụchọ? Ọfọn, Webmasters bụ ngwá ọrụ iji hụ otú Google si ele saịtị gị anya maka ahụike, nkwụsi ike, na nsonaazụ ọchụchọ. Lelee data njehie ma gbalịa idozi ha ka ha na-apụta.
Melite Ọdịnaya Gị - Na ederede nke post a, emelitere m opekata mpe ọkara iri na abụọ m na-edegharị iji hụ na ha debere. Ga - eju anya na nsogbu dị na saịtị gị nke na - ebilite - dịka njikọ na saịtị ndị dị na mpụga nke na - adịkwaghị, onyonyo nwere ike ịnwe nsogbu, yana ọdịnaya ochie. Mee ka ọdịnaya gị dị ọhụrụ ka ọ bụrụ nkekọrịta, edepụtara, yana ọ baara ndị na-ege gị ntị uru.
Nyochaa Aha & Meta Nkọwapụta Tags - Greatzọ dị mma iji bulite saịtị gị maka ngwa ọchụchọ bụ ịwụnye na hazie plugins. Aha ga - enyere peeji gị aka edepụta nke ọma maka ọdịnaya ọ na - ekpughere ya na nkọwapụta meta ga - eme ka ndị ọrụ njin ọchụchọ chọọ ịpịpụta na nsonaazụ ndepụta gị.
Nke a bụ ozi infographic zuru oke yana ihe karịrị 50 ndụmọdụ na omume sitere na Akwụkwọ Bigrock!
Tags: 301 Redirect maka Broken LinksWeghachite WordPress gịGbanwee okwuntughe gịLelee Adsense Mgbasa ozi esighi na weebụsaịtị gịLelee Mgbakwunye NjikọLelee Nbanye Email na Contactdị KpọtụrụLelee maka Broken LinksLelee Ngwaọrụ Google Console (Webmaster)Lelee akụrụngwa ejiLelee Njikọ Sidebar na BlogrollsLelee Social Media LinksLelee Nchịkọta Ndị Nchịkọta weebụLelee Nchebe WeebụLelee njikọ njikọ gịLelee gị n''sntanet na faili ntanetịimeLelee gị NavigationHichaa AhịhịaKọwaa Oge Nchekwa onweHichapụ Spam CommentsHichapụ ngwa mgbakwunye achọghịHichapụ achọghị GburugburuGbanyụọ akpaaka WordPress mmeliteGbanyụọ Debug ModeGbanyụọ Trackbacks na PingbacksIhe njikarịcha fotoDịkwuo Memory Limitnyocha malwareMedia faịlụ HichaaNa-ebuli Tebụl dataIzipu NlekọtaUme Banyere nkụnye eji isi mee Pụrụ Iche na Site ImagesWepụ drafts & Post RevisionsWepụ ndị nchịkwa weebụsaịtị na-adịghị arụ ọrụEmeohuru Bochum & NgalabaZaghachi CommentsNyochaa nchịkọta GoogleNyochaa aha Meta & Meta nkọwa mkpadoNyochaa Na-Page-SEONyochaa Gị Banyere Anyị PageGbaa Site Site WP CheckupWere Ndabere kwa ụbọchịUle Nchọgharị & Ngwaọrụ NdakọrịtaMelite ụbọchị nwebisiinka na Yourkwụ GịMelite Ọdịnaya GịMelite ngwa mgbakwunye WordPress gịMelite isiokwu gị WordPressMelite WordPress Wijetị gịKwalite WordPress na nke kachasị ọhụrụNyochaa weebụsaịtị gịNlekota oru nchedo weebụNyochaa Speed ​​Speed ​​weebụsaịtịnyocha wp